Huawei kwuru na ekwentị 5G dị ọnụ ala ga -abata n'afọ na -abịa | Androidsis
Huawei kwuru na ekwentị ndị dị ọnụ ala na nkwado 5G ga-abịa n'afọ ọzọ
Netwọk 5G izizi ụwa mere ngosipụta na South Korea n'ọnwa gara aga. Ka izu ole na ole gachara, ebido netwọkụ 5G mbụ nke Europe na Switzerland, yana ekwentị 5G atọ mbụ dị n'ahịa Europe; ihe niile dị oke ọnụ, n'ezie, ebe ọ bụ na ha bụ akara arụ ọrụ dị elu.
Kedu mgbe anyị ga-ahụ ngwaọrụ etiti dị ọnụ ala nwere nkwado 5G n'ahịa? Dabere na onye isi ụlọ ọrụ Huawei Yang Chaobin, nke ahụ ga -eme na 2020. Ekwentị ndị mbụ ufọt ufọt 5G dị ọnụ ala ga-adị na njedebe nke afọ na-abịa.
N'otu ụzọ ahụ netwọkụ 4G gbasaa ngwa ngwa karịa netwọkụ 3G, mmepe nke 5G ga -adị ọbụna ngwa ngwa karịa nke netwọkụ 4G. Iji gosipụta nkwupụta ya, onye isi Huawei chetara onye ọ bụla ka ekwentị 4G mbụ were ihe dị ka afọ atọ kụrụ shelves, ebe ekwentị 5G mbụ chọrọ naanị otu afọ.
Ka ọ na-erule ngwụcha 2020, anyị ga-amalite ịhụ ngwaọrụ dị n'etiti nwere njikọ 5G yana, dị ka onye isi Huawei si kwuo, na 2021 enwere ike nwee ngwaọrụ ntinye ọkwa 5G.
Ugbu a, Ekwentị 5G dị ọnụ ala bụ Xiaomi My Mix 3 5G, nke ọnụ ahịa ya bụ euro 599 n'ahịa ụwa. N'aka nke ọzọ, ekwentị Huawei 5G mbụ na nke dị n'ezie ịzụta bụ Huawei Nwunye 20 X 5G, nke a na -akwụ ọnụ ahịa ya gburugburu euro 800. A na -akwado nke ikpeazụ site na chipset Kirin 980, nke jikọtara ya na modem Balong 5000 5G nke nwere ike iru oke ruru 6,5 GB / s ekele maka teknụzụ mmWave.
Ihe atụ nke atọ nwere njikọ 5G dị na Europe bụ Oppo Reno 5G. Nke a na -eji ngwa ngwa Snapdragon 855 na modem X50 nke na -enye njikọ 5G na ngwaọrụ ahụ. Ngwaọrụ na -efu ihe karịrị euro 600 n'ụdị ya nwere ikike RAM na ohere nchekwa.
Otú ọ dị, ịnweta ekwentị 5G ugbu a abụghị nhọrọ kacha mara ihe. Ọnụ ahịa ha ka dị oke elu. Ọzọkwa, netwọkụ 5G ka dị n'oge ọ bụ nwata, ọ dịkwa naanị na mpaghara ole na ole na mba ụfọdụ. Ya mere, ọ ga -ekwe omume ị na -eche ka ị nweta otu na ọnụ ahịa ka mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Huawei kwuru na ekwentị ndị dị ọnụ ala na nkwado 5G ga-abịa n'afọ ọzọ